होसि’यार ! सेतो पुतलीका कारण गुम्नसक्छ आँखाको ज्योती ! जनचेतनाको लागि शेयर गरौं – ताजा समाचार
होसि’यार ! सेतो पुतलीका कारण गुम्नसक्छ आँखाको ज्योती ! जनचेतनाको लागि शेयर गरौं
आत्तिँदै अस्पताल पुगिन् । डाक्टरले परीक्षणपश्चात सम’स्याको कारण सेतो पुतली भएको थाहा भयो । अहिले ककाठमाडौंको तिलगंगा आँखा अस्पतालमा चिकित्सकहरुको निगरानीमा उनको उपचार भइरहेको छ ।
सुकमायाकी ३८ दिनकी छोरी र स्वीकृति सेतो पुतलीका कारण आँखामा गम्भीर सम’स्या भोग्ने केही प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् ।
यसवर्ष भदौ दोस्रो साता फेरि यो रोग देखिएपछि बिहीबार काठमाडौंबाट डा. उपाध्याय नेतृत्वको टोली पोखरा आइपुगेको छ । यो प्रत्येक २ वर्षमा देखा पर्ने ख’तरानाक रोग भएको टिचिङ अस्पतालका डाक्टर मदनकुमार उपाध्याय बताउँछन् ।
चिकित्सकहरुका अनुसार यो रोग पोखराबाट अन्यत्र पनि फैलिएको छ । वीपी कोइराला नेत्र अध्ययन केन्द्रकी आँखा रोग विशेषज्ञ डा. रञ्जु खरेल सिटौलाकाअनुसार यकीन तथ्यांक नभए पनि हालसम्म करिब १५ हजारले सापुकै कारण प्रभावित भएको अनुमान छ । ‘प्रत्येक ५ जनामा एक जना अस्पतालको सम्पर्कमा आउँछ । यो सम’स्या सहरमा भन्दा गाउँमा बढी भएकाले पनि एकीन तथ्यांक निकाल्न गाह्रो छ,’ उनले भनिन् ।
डा खरेलले पछिल्लो समय सापु रोग महामारीकै रुपमा फैलिँदै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गरिन् । ‘यो रोगले छोटो समयमै आँखामा सम’स्या पार्छ,’ उनले भनिन्, ‘यसलाई थोपा औषधिले काम गर्दैन । इन्जेक्सन वा शल्यक्रिया गर्नुपर्छ ।’ उनले शल्यक्रिया गर्न १५ देखि २० हजारसम्म खर्च लाग्ने जानकारी दिइन् ।
सेतो पुतलीको झुसका कारण लाग्ने यो रोग पछिल्लो समय गण्डकी प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै देखिएका छन् । बिहीबारसम्म हिमालय आँखा अस्पतालमा यही सम’स्या लिएर ६ जना आइपुगेका छन् । गण्डकीमा पनि कास्की जिल्लालाई यो रोगको धेरै जोखिममा रहेको हिमालय आँखा अस्पतालका डाक्टर हरिमाया गुरुङ बताइन् । उनले अस्पतालको सम्पर्कमा आएका ३५ पीडितमध्ये कास्कीका मात्रै ३० जना विरामी रहेको बताइन् ।
धुलोका काणहरु पर्नेदेखि विभिन्न कारणले आँखा चिलाउने, रातो हुने जस्ता सम’स्या आउँछ । तर सापुकै कारण हो भनेर कसरी छुट्याउने त ? डा. उपाध्याय भन्छन्, ‘आँखा अचानक रातो हुँदै जान्छ, नानीमा सेतो दाग देखिनथाल्छ, उज्यालोमा हेर्न गाह्रो हुन्छ । र कम समयमै आँखाको ज्योति कमजोर भयो भने सापु हो ।’
४८ घन्टाभित्र उपचार भए निको हुनसक्ने डा. उपाध्याय जानकारी दिए । तत्काल उपचार गर्दा आँखाको ज्योति गुम्ने ख’तरा कम हुन्छ,’ उनले भने ।
सेतो पुतली उज्यालो बत्तिमा बढी आकर्षित हुने हुनाले त्यसबाट बच्न उनले सुझाए । ‘सेतो पुतलीको सिधा संसर्गबाट मात्रै होइन, पर्दा, सिरक, टाबेल झ्यालबाट पनि सम’स्या निम्त्याउन सक्छ,’ उनले भनेका छन् ।
सापु सेतो पुतलीका कारण रोग भए पनि के कारण इन्फेक्सन हुन्छ भन्ने पत्ता लागेको छैन । कारण पत्ता नलाग्दा उपचारमा पनि सम’स्या भइरहेको छ । ४४ वर्ष भइसक्दा पनि यसको मुख्य कारण किन पत्ता लाग्न सकेन त ? ‘टक्सिन वा अन्य केही कारणले हो भन्ने अझै पत्ता लगाउन सकेका छैनौं । सायद मेरो पालामा नलाग्न पनि सक्छ । तर, यसैको खोज गर्न दोस्रो, तेस्रो पुस्ता आइसकेको छ,’ उपाध्यायले भने ।
यो उज्यालो वस्तु जस्तै बत्ति, पर्दा, कपडा, झ्यालमा बढी आकर्षित हुने चिकित्सक बताउँछन् । पोथी सेतो पुतलीले अण्डा ढाक्न प्रयोग गर्ने झुसका कारण धेरै यो रोग फैलिएको डा. रञ्जुले जानकारी दिइन् ।यो पुतली पोखरा आसपासमै बढी पाइने अध्ययनले देखाएको छ । अनलाइनखबरबाट